ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့ကမ္ဘာ့သံရုံး Tour 2017 ဝန်းကျင်
ကမ္ဘာ့ဖလားသံရုံး Tour 2017 ဝန်းကျင်
ဝါရှင်တန်ဒီစီ - ကမ္ဘာ့သံရုံးခရီးစဉ်န်းကျင်
ကိပ်ဗာဒီသမ္မတနိုင်ငံသံရုံးက။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်, DC / နစ်ခ် Eckert နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ၏ Courtesy
ကမ္ဘာ့ဖလားသံရုံးခရီးစဉ်ခန့်အဆိုပါ၏လက်မှတ်အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါသည် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်, DC, အနုပညာရှင်နဲ့သိမ်းသွားလေ၏, အဆိုတော်, ကထိက, ဆရာများနှင့်အခြားသူများနှင့်သံရုံးများကိုရည်ညွှန်းပြသဝါရှင်တန်ဒီစီနိုင်ငံတကာယဉ်ကျေးမှု၏နှစ်စဉ်ပွဲကျင်းပ။ ဒါဟာယဉ်ကျေးမှု၌ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအစဉ်အလာ, အစားအစာနှင့်တေးဂီတအကြောင်းကိုသင်ယူဖို့အလွန်အေးမြသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ရက်စွဲနှင့်အချိန်: စနေနေ့မေလ 6, 2017, 10 နံနက်-4 ညနေ
တည်နေရာနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး: အားလုံးပါဝင်သံရုံးထဲမှာတည်ရှိသည် ဘ quadrant အနီးရှိသူတို့ထဲကအတော်များများ, ဝါရှင်တန်ဒီစီ၏ Dupont စက်ဝိုင်း ။ အဆိုပါ Dupont စက်ဝိုင်းပြန်ကြားရေး Booth မက်ဆာချူးဆက်ရိပ်သာလမ်း, P ကိုလမ်း, နှင့် 20 လမ်း, ကဘအကြားတည်ရှိသည်။ သံရုံးအများအပြားပြွတ်ဒီဧရိယာကနေ 10 မိနစ်လမ်းလျှောက်အတွင်းတည်ရှိသည်။ Complimentary လွန်းဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုမက်ဆာချူးဆက်ရိပ်သာထံမှ ထွက်. , နေ့ကိုတစ်လျှောက်လုံးအလုပ်လုပ်ပြီး နှင့် P ကိုစိန့်, ကဘ။ ဝါရှင်တန်ဒီစီ။
ပါဝင်သံရုံးအာဖဂန်နစ္စတန်, အာဖရိကသမဂ္ဂ, အယ်လ်ဘေးနီးယား, အာဂျင်တီးနား, အဇာဘိုင်ဂျန်, ဘဟားမား, ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်, ဘာဘေးဒိုးစ, ဘေလီဇ်, ဘိုလီးဗီးယား, ဘော့ဆွာနာ, ဘရာဇီး, ချီလီ, ကိုလံဘီယာ, ကော့စတာရီ, ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ, အီသီယိုးပီး, ဂါဘွန်, ဂါနာ, ဂွာတီမာလာ, ဟေတီ, အင်ဒိုနီးရှားတို့ပါဝင်သည်, ကင်ညာ, ကိုရီးယား, ကိုဆိုဗို, လစ်ဗျား, မက္ကဆီကို, မိုဇမ်ဘစ်, နီပေါ, အိုမန်, ပါကစ္စတန်, ပနားမား, ပီရူး, ကာတာ, ဆော်ဒီအာရေဗျ, တောင်အာဖရိက, သီရိလင်္ကာ, ယူဂန်ဒါ, ဥရုဂွေးနှင့်ဗင်နီဇွဲလား။
အင်ဒိုနီးရှားသံရုံးကလှည့်လည်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်, DC / ဒွန် Tanguilig နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ၏ Courtesy
ဂီတသမားဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်, DC ကာလအတွင်းအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှာလုပ်ဆောင်။ အဆိုပါသံရုံး Dupont စက်ဝိုင်းအနီးမက်ဆာချူးဆက်ရိပ်သာလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။
နီပေါသံရုံးခရီးစဉ်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်, DC / နစ်ခ် Eckert နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ၏ Courtesy
နီပေါသံရုံးဝါရှင်တန်၏ကမ္ဘာ့ဖလားသံရုံးခရီးစဉ်ခန့်ပါဝင်။ အဆိုပါသံရုံးမြောက်ဘက် Dupont စက်ဝိုင်းနှင့်ရုရှားယဉ်ကျေးမှုစင်တာအနီး Connecticut Avenue ၏အနောက်ဘက်၏တည်ရှိသည်။
ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုသမ္မတနိုင်ငံသံရုံးက။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်, DC / ဒွန် Tanguilig နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ၏ Courtesy
အဆိုပါထရီနီဒက်သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးနှင့်တိုဘာဂိုကနေ Ladies အဆိုပါ DC ကကာရစ်ဘီယံပွဲတော်ကြီးထံမှဝတ်စုံတခုအဖြစ်။ အဆိုပါသံရုံးရုံအရှေ့ Dupont စက်ဝိုင်း၏တည်ရှိသည်။
ဆော်ဒီအာရေးဗီးယားသံရုံးကလှည့်လည်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်, DC / ဒွန် Tanguilig နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ၏ Courtesy
ထိုင်းသံရုံးကလှည့်လည်။ Walter Woodward နေဖြင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်, DC / ဓာတ်ပုံ၏ Courtesy
တော်ဝင်ထိုင်းသံရုံးကကမ္ဘာ့ဖလားသံရုံးခရီးစဉ်ခန့်မှာအသီးပန်းပုပေါ်ထွန်းရေးဖြစ်သည်။ အဆိုပါသံရုံးက Georgetown အတွက် Wisconsin ပြည်နယ်ရိပ်သာလမ်းပေါ်မှာတည်ရှိပါတယ်။
တော်ဝင်ထိုင်းသံရုံးက။ Walter Woodward နေဖြင့်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်, DC / ဓာတ်ပုံ၏ Courtesy
တော်ဝင်ထိုင်းသံရုံးကအဆိုပါကမ္ဘာ့ဖလားသံရုံးခရီးစဉ်လောက်မှာဝါရှင်တန်ဒီစီမှာရှိတဲ့ကာလအတွင်းတစ်ဦးလက်ဝှေ့သရုပ်ပြပေးသည်။ အဆိုပါဖြစ်ရပ်အနုပညာရှင်နှင့်သိမ်းသွားလေ၏, အဆိုတော်, ကထိက, ဆရာများနှင့်အခြားသူများနှင့်သံရုံးများကိုရည်ညွှန်းပြသဝါရှင်တန်ဒီစီနိုင်ငံတကာယဉ်ကျေးမှု၏နှစ်စဉ်ပွဲကျင်းပဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် DC ကအကြောင်းဆက်ဖတ်
တိုင်ဆန် VA သို့စျေးဝယ်ကုန်တိုက်: နာရီ, လမ်းညွှန်များ & ပို
National Park Maps ကို: DC ကရဲ့ဘေ့စဘောအားကစားကွင်းသို့လမ်းညွှန်
Clarendon စာဆိုင်များ - Arlington ဗာဂျီးနီးယားနှင့်ပတ်သက်သောစားပွဲအတွက်လမ်းညွှန်
Queenstown ထွက်ပေါက်: ဂလားပင်လယ်အော်တံတားအနီးဝယ်ရန်
Harriet Tubman မြေအောက်ရထားလမ်းဧည့်သည်မြစင်တာ
ပရာ့ဂ်က The ချက်သမ္မတနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်စီးတီး
တစ်ဦး Bundle ကို Save ဖို့အခြားရွေးချယ်စရာဗြိတိန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ကိုသုံးပါ
ထရီနီဒက်ပွဲတော်ကြီးများအတွက်စည်းကမ်းများ: ဟုတ်တယ်, အဲဒီတည်ပါနဲ့!
ဘယ်လိုတစ်ခုမှာ Get မှမက္ကဆီကန်ခရီးသွားကဒ်များနှင့်
ပဲရစ်အတွက် Rodin ပြတိုက်မှတစ်ဦးကအပြီးအစီးလမ်းညွှန်
San Diego မှကောင်တီဝတ်လစ်စလစ် Beach
ဆွီဒင်အတွက်အကောင်းဆုံး Spa မ်ား